कानमा अनौठो आवाज सुनिन्छ – क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ! – Mission Khabar
कानमा अनौठो आवाज सुनिन्छ – क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ !
मिसन खबर १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १२:३०
काठमाडौं । शरीरमा अनावश्यक कोसिकाहरूको अनियन्त्रित फैलावटबाट नै क्यान्सर हुने गर्दछ । यसरी अनावश्यक कोसिकाहरु देखिएको शरीरका जुन कुनै भागमा क्यान्सर हुन सक्छ । कतिपय क्यान्सर समयमै पहिचान गर्न सके निको पार्न सकिने भएकाले हेलचेक्राई गर्न नहुने विज्ञहरुले बताउनेगरेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार कानमा अनौठो आवाज सुनिन्छ भने त्यो पनि क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ । कुनै बेला कानमा अप्ठ्यारो तथा असामान्य आवाज सुनिन्छ भने त्यसलाई नजर अन्दाज नगर्न स्वास्थ्य विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् । कानमा ‘टेम्पोरोम्यान्डिबुलर डिस्अर्डर’ (बंगारा दाँत र त्यस वरपरका मांशपेसीको दुखाई)सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कानमा हुन्छ भने यसबारे सचेत हुनुपर्ने विज्ञको भनाई छ ।
यसरी कानबाट सुरु भएको दुखाई गालातिर सर्दै जाने, कान भरिएजस्तो भएर दुख्ने, अनौठो आवाज वा झनझनाहट अथवा घण्टी बजेजस्तो आवाज आउने मुखको क्यान्सरका कारण हुन सक्छ । यसैगरी ओठ वा मुखको घाउ निको नहुनु, मुखभित्रको मुनि सेतो रंगको धर्सा बन्नु, दाँत टुक्रिनु, मुखमा गाँठागुठी आउनु, खानेकुरा निल्नमा समस्या हुनु लगायतका लक्षण पनि मुखको क्यान्सरका कारण देखा पर्छन । यस्तो समस्या भएमा तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
मुखको क्यान्सर विभिन्न कारणले हुन्छ
बेलायतमा गरिएको अध्ययनअनुसार ६० प्रतिशत क्यान्सर धूम्रपानका कारण हुनेगरेको पाइएको छ । धूम्रपान गर्दै गरेको व्यक्तिको नजिक बस्ने व्यक्तिलाई पनि क्यान्सरको खतर निकै धेरै हुने यो अध्ययनबाट औँल्याइएको छ । यस्तै ३० प्रतिशत क्यान्सरका रोगी मद्यपानबाट भएको देखिएको छ ।